February 2020 – Kalfadhi
February 29, 2020 Hassan Istiila
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku tilmaamay weerar xalay lagu qaaday xarunta Ahlu Sunna ee magaalada Dhuusamareeb inuu yahay mid lagu galay dambi dagaal. Akhriso Warka uu saaray Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir. Waxaa ilo xog-ogaal ah ii xaqiijiyeen in shalay galab dawlada federaalka ah Dhuusamareeb ka dejisay hubkii ciidan ka Gaashaan lahaayeen ee loogu tala galay in Alshabaab looga saaro Hoteelada ay qabsadaan. Waa hub derbiyada duleeliya, laaguna tala galay in meeshii lagu rido aanay suntiisa cidna ku noolaan, wuxuuna gubayaa qofkii uu gaaro ama ku ag dhaco. Hubkaas…
Maamulka Koonfur-Galbeed, ayaa isku diyaarinaya soo dhisida xildhibaannada Baarlamaanka labaad ee maamulkaasi, iyadoona ay socdaan kulamo ay leeyihiin odayaasha dhaqanka ee deegaannadaasi. Guddiga farsamada ee soo xulista xildhibaanada Baarlamaanka 2aad ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo bandhigay shuruudaha laga doonayo xubnaha u sharaxan ka mid noqoshada baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shuruudaha laga rabo Xildhibaanada waxaa ka mid ah in uusan ka yareyn 25-sano, islamarkaana uu bixiyo lacag is-diwangalin ah oo aan la shaacin tiradeeda. Dhowaan ayaa Guddiga farsamada soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Koofurgalbeed Soomaaliya waxa ay soo bandhigeen…
February 27, 2020 Hassan Istiila
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay dhagax la sheegay inuu yahay “kheyraad qaali ah” oo si “sharci darro ah” looga soo qaaday deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan. Warar kala duwan ayaa kasoo baxay cidda soo qaadatay dhagaxan oo yaallay meel ay gacanta ku hayaan xoogagga Al-Shabaab. Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in dad u adeegaya Al-Shabaab ay qaadeen dhagaxan ayna ku howlanaayeen sidii ay ugu iib geyn lahaayeen. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, ayaa sheegay in xitaa arrintan darteed uu dhiig u daatay. “Dadka taariikhda…
February 26, 2020 Hassan Istiila
Senator Xuseen Sheekh Maxamuud, xoghayaha guddiga dib-u-eegista iyo hir-gelinta dastuurka dalka, oo ka hadlayay dastuurka maamulka Puntland, ayaa sheegay in dastuurkaasi uu dhigayo in maamulka Puntland ay tahay dowlad-madax-banaan. Mr Xuseen, ayaa sidoo kale xusay in dastuurkaasi ay ku jiraan farqado sheegaya, “Haddii federaalka la diido in Puntland ay ka go’ayso dalka Soomaaliya? Haddii khilaafka koonfurta uu sii taagnaado sidoo kale in Puntland ay go’ayso? “Dastuurka KMG ee dalka hadda u yaalla waxaa ku qoran, Dowlad-gobolleed kasta oo heysatay dastuur, ka hor dastuurka KGM, waxaa ay heysaneysaa dastuurkeeda, ilaa dastuurka…
February 25, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaanada Baarlamanka Labaad ee Dowlad goboleedka Galmudug ayaa shalay waxaa ay yeesheen mid kamid ah kulamadooda,iyaga oo kulankooda kuuga doodey miisaaniyadda ay soo gudbisey Wasaarada Maliyada Dowlada Galmudug. Dood dheer ,kadib Xildhibaannada Baarlamaanka Galmudug ayaa waxaa ay ansixiyeen miisaaniyada 2020 oo gaaraysa 17,230,054.00 ( todobo iyo toban malyan, laba boqol iyo soddan kun, iyo konton iyo afar doolar). Guddoomiyaha Baarlamanaka Galmudug Dr Maxamed Cali Gacal ayaa sheegay inay ansax tahay miisaanadda 2020 ee Dowlad Goboleedka Galmudug oo sanadkii 2018 aheyd 8 milyan,waxaana la kordhiyay in ka badan 50%. Fadhigii shalay…
February 24, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxman ayaa shalay kulan la qaatay Wakiilo ka kala socday UN, USA iyo safiirada dalalka la isku yiraahdo Copenhegan Group oo ah safiirada dalalka saaxiibka dhow la ah Soomaaliya. Guddoomiyaha iyo xubnihii uu la kulmay ayaa ka wada hadlay Doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan Marka la gaaro sanadka 2021-ka. Safiirada ayaa ku ammaanay Baarlamaanka Soomaaliya howlaha ay hayaan ee la xiriira Arrimaha Doorashooyinka gaar ahaan sameynta sharciyada muhiimka u ah Doorashooyinka Dalka,Sidoo kalena waxa ay…
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay mutadawiciinta hormuudka u ah Olalaha Isxilqaan ayaa ku dhiirrigeliyey in ay kordhiyaan dadaalkooda si degdeg loogu soo gabagabeeyo dib u dhiska Caasimadda, looguna gudbo wajiga labaad ee Olalahan oo lagu hormarinayo guud ahaan gobollada dalka. Mutadawiciintan oo isugu jira Shaqaalaha Rayidka ah ee dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa la wadaagay Madaxweynaha warbixin ku saabsan goobaha dib loogu dhisayo Ololahan ee ilaa haatan gabogabada maraya oo ay ka mid yihiin Tiyaatarka Qaranka, Madxafka, Maktabadda, Taalooyinka iyo…
Madaxweynaha Galmudug iyo Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxbanaan oo ka wada hadlay doorashooyinka federalka
February 23, 2020 Hassan Istiila
Madaxweynaha maamulka Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) ayaa la kulmay xalay kguddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Yarey) iyo xubno ka mid ah guddiga oo booqasho ku jooga magaalada Dhuusamareeb. Madaxweynaha Galmudug Qoor Qoor ayaa xubnaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan ku amaanay howlaha wacyigalinta bulshada ee ay u tageen deegaanada maamulkaasi gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. Kulankan ayaa la iskula soo qaaday doorashooyinka federalka ee la qorsheeyay in la qabto horaanta sanadka soo socda ee 2021. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madax banaan Xaliimo Yarey ayaa u sheegtay madaxweyne Qoor-qoor…
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo sheegay in Baarlamaanka ay u har-sanyihiin shaqooyin badan
February 22, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, oo khudbad ka jeediyay munaasabadii xiritaanka ee kalfadhiga 6-aad e Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in fadhigii Baarlamaanka ee 6-aad la ansixiyay sharciyo badan, islamarkaana labada Gole ee Baarlamaanka ay ka dhaxeysay wada-shaqeyn aad u sareysa. Guddoomiye Mursal, ayaa sheegay in Xildhibaannada marka ay kasoo noqdaan fasaxa ay u yallaan shaqooyin badan, oo ay ugu horeyso arrinta Dastuurka iyo Doorashooynka. Baarlamaankii 9-aad waxaa uu Dastuurka kusoo wareejiyay Baarlamaanka 10-aad ee hadda shaqeeya, waxaana Baarlamaanka hadda jira wakhtigiisa uu ku egyahay sannadkan, ayuu yiri Guddoomiyaha. Sidoo…
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qeyb galay munaasabadda xiritaanka Kalfadhigii 6-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa madasha ku saxiixay Sharciga Doorashooyinka oo saldhig u ah geeddi socodka dimuqraadiyeynta dalka. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay khubarada Soomaaliyeed ee so diyaariyey sharcigan, doodihii miro dhalka ahaa ee laga galay oo ka soo bilowday heshiiskii Baydhabo Juun 2018. “Shacabka Soomaaliyeed, waa aragtaan in dib la idin ku soo celiyey awooddiinii, maantana ay gacantiina ku jirto. In Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ay horey u soo ansixiyeen, aniguna aan madashan ku…